Shir heer sare ah oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho+Sawirro – Bandhiga
Shir heer sare ah oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho+Sawirro
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka xal u helidda barakacayaasha Gobolka Banaadir, waxaana daahfuray Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Soomaaliya, mudane, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Shirka ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray sidii xal buuxa looga gaari lahaa dhammaan dhibaatooyinka heesta Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan Barakacayaasha.
Xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Wakiillo ka socda Qaramada midoobay iyo hay’adaha sama-falka ayaa ka qeyb galay shirka.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo kulanka furay ayaa sheegay in 2.6 Milyan oo Soomaali ah loo aqoonsan yahay in ay barakacayaal yihiin , halka Hal Milyan Dad ka badanna ay daafaha Caalamka ku nool yihiin Qaxooti ahaan , isagoo tilmaamay in Nus Malyuun Qofna ay ku nool yihiin Magaalada Muqdisho.
Sababta ugu badan ee keenta Qaxa iyo barakaca ayuu ku tilmaamay, dagaallada sokeeye, fatahaadaha , duufaannada iyo abaaraha, kuwaas oo keena nabad guur iyo is-beddel ku dhaca Cimmilada, Xoolahana ku qasba in ay nolol u soo raadsadaan Magaalooyinka.
Ra’isul wasaare ku xigeenka ayaa sheegay in xukuumaddu ay ahmiyad weyn siisay xal u helista barakacayaasha, taas oo qeyb ka ah Tubta siyaasadda loo dhan yahay ee arrimaha Bulshada,wuxuuna ku micneeyay in Dadka kasoo hayaamay degaannadoodii hore ay qeyb ka yihiin Bulshada inteeda kale.
Barakacayaashu ayaa xaq u leh in ay helaan ,amni, xuquuq, Nolol, Hooy iyo Hu’, wuxaana Mudane Mahdi uu sheegay in Dowladdu ay heegan u tahay sidii wax loogu qaban lahaa.